Sweden oo cabsi ka qabta weeraro argagixiso | Somaliska
Hay'ada amaanka ee Sweden (Säpo) ayaa kor u qaaday heerka cabsida laga qabo falalka argagixisada ayadoo sabab looga dhigay in ay dhici karto in weeraro argagixiso ama abaabulkood uu ka socda dalka Sweden. "Cabsidaan waxay ku saabsan tahay baaritaan aan ku hayno rabitaan ay dad rabaan in ay falal argagixiso geystaan ama ay awood u leeyihiin in ay gaystaan falal argagixiso" ayuu yiri Anders Danielsson oo ah madaxa hay'ada amaanka Sweden. Hay'ada Amaanka ayaa sheegtay in cabsida argagixisada ay ka qabto ururka Soomaaliyeed Xarakada Al-shabaab ayna la xiriirto dad qoritaan iyo caawimaad lacageed oo Sweden gudaheeda looga sameeyo Al-shabaab. "Indhaheenu waxay saaranyihiin Soomaaliya iyo Al-shabaab, waxayna la xiriirtaa qoritaan iyo lacag aruurin" ayuu yiri Magnus Ranstorp ah madaxa Machad baara khataraha argagixisada. Hay'ada Amaanka ayaa diiday in ay cadeyso in dad la xiray iyo in kale iyo dhab ahaanta khatarta waxay tahay.
Hay’ada amaanka ee Sweden (Säpo) ayaa kor u qaaday heerka cabsida laga qabo falalka argagixisada ayadoo sabab looga dhigay in ay dhici karto in weeraro argagixiso ama abaabulkood uu ka socda dalka Sweden.
“Cabsidaan waxay ku saabsan tahay baaritaan aan ku hayno rabitaan ay dad rabaan in ay falal argagixiso geystaan ama ay awood u leeyihiin in ay gaystaan falal argagixiso” ayuu yiri Anders Danielsson oo ah madaxa hay’ada amaanka Sweden.
Hay’ada Amaanka ayaa sheegtay in cabsida argagixisada ay ka qabto ururka Soomaaliyeed Xarakada Al-shabaab ayna la xiriirto dad qoritaan iyo caawimaad lacageed oo Sweden gudaheeda looga sameeyo Al-shabaab.
“Indhaheenu waxay saaranyihiin Soomaaliya iyo Al-shabaab, waxayna la xiriirtaa qoritaan iyo lacag aruurin” ayuu yiri Magnus Ranstorp ah madaxa Machad baara khataraha argagixisada.
Hay’ada Amaanka ayaa diiday in ay cadeyso in dad la xiray iyo in kale iyo dhab ahaanta khatarta waxay tahay.